Nagu Saabsan - RJ Qalabka CO., Ltd.
Air usheeda dhexe
Maro Inspection Machine
Maquufin Glue Machine
Edge Machine Daboolayo
Shirkadda Our ka kooban yahay 5 waaxaha, Sales, R & D, S & C, Production iyo waaxda maaliyadda. Iyadoo R xoog & waaxda D, sannad kasta, waxaan samayn doona baaritaanka oo idil iyo tayeynta noo soo saarka.
Sababtoo ah oo ka mid ah dadaalka kooxdeena, ee aanu hayno wax soo saarka our heer sare, our tayo leh mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka oo dhan. Hadda waxaan u noqday shirkadda ugu wayn hawada usheeda dhexe ballaarinta ee Shiinaha.
Changzhou Rongjiu Makiinado Co., Ltd waxaa la aasaasay sannadkii 2011, oo hadda waxa uu leeyahay laba magac ee Rongjiu iyo AOKS. Shirkadda inta badan diiradda on design, soo saaridda iyo suuq-geynta ee waxyaabaha sida silsilad
nooca hawada fallaadhihii ballaariyo, xabbad leben nooca hawada fallaadhihii ballaariyo, mari fallaadhihii muhiimka ah hawada nooca ballaariyo, dhaqaajinta ammaanka set ballaarinta hawada iyo wixii la mid ah.
dhawr sano ee horumarinta ka dib markii, shirkadda hadda leh a dhirta ka badan 3,000 oo mitir oo laba jibbaaran, oo ay la socdaan xarumaha processing keeno, lathes CNC, mashiinada darane cylindrical of iskeel oo kala duwan iyo soo saaridda xirfadeed equipments.Then shirkadda hadda uu noqdo hogaamiyaha warshadaha ay sanadlaha ah qiimaha wax soo saarka oo gaarey ku dhowaad 10 million. Waa maxay more Shirkadda dhigaysa dadaal joogto ah u bixiyaan horumar dheeraad ah oo macquul ah oo cilmi ah in qaab-dhismeedka gudaha iyo sidoo kale habka soo saaridda of badeecada, iyaga more raagaya, lagu kalsoonaan karo oo xasilloon. Waqtigan xaadirka ah shirkada waxaa ka go'an in dhismaha brand iyo horumarinta, iyo in uu siiyo macaamiisha la soo saarka oo tayo sareeya si ay ula kulmaan baahida ay shakhsi.
Waxaan ka dhigi ballamo si ay u bixiyaan tayada fasalka-koowaad iyo sidoo kale adeegyo tayo hufan oo sare si ay u ilaaliyaan koboca ee shirkadda. Waxaan ilaaliyaan mabda'a of aadanaha u janjeedha, iyo ku guuleysan guul by our u gaar ah sidoo kale ku dadaalaan. Waxaa sidoo kale, waa ayo rajadayada weyn in aan ka dhergin karo macaamiisha oo dhammuba aannu marno, gaadho iskaashi guul-guul iyo si wadajir ah ula dadka ka soo dhammaan qaybaha nolosha shaqeeyaan si ay u abuuraan berri ka fiican!
Cinwaanka: 1.NO.28, Qianjia Industrial Park, Yaoguan Town, Degmada Wujin, Changzhou City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
AOKS & R.J. Qalabka ayaa soo xaadiray ANDTEX201 ...
Shirkadda cusub ee Laanta: Chengli precision Equ ...
Mashiinka Rongjiu ee ka qeyb galaya Shirka 18-aad ee Shangh ...
Global Market qabriga maryo Makiinado 2018-2022